Wallagga, Magaalaa Shaambuu Irraa Qeerroon waan jedhu - Ayyaantuu News
3 comments - What do you think? Posted by admin - 09/09/2012 at 11:25 am Categories:
3 Responses to “Wallagga, Magaalaa Shaambuu Irraa Qeerroon waan jedhu”
Qaaqummee says:	09/09/2012 at 12:52 pm	Wal dhagawuun baay’ee bayeessa. Waanni sabbonaan kun dubbates heddu bayeessa. Naannoo Wallagga keenyaa qofa otoo hin taane, biyya Oromiyaa hundatti waan inni dubbate kana hundaa hojjatu. Naanno sana (Shaambuu) dhufee kan dubbate Tigree miti. Ilmaanuma Oromooti. Gantuu taatee warra Tigree gargaaraa jirtu. Mallas nama tokkichatu du’e. Tigroonnifi ilmaan Oromoo warri garaa ishii guuttachuu jettee Tigroota jala galte ilmaan Oromoo lakkoofsi isaanii hammana jedhamee hin tilmaamamne ajjeesani. Warra wayyaa yookaa qoobii gaddaa keewwadhaa, suuraa isaa baadhaa deemaa jedhan sana ajjeesuu barbaachisa. Yoo dhuguma qeerron olola qofa hin taane, jaroota sana hundaa fixuu barbaachisa. Otoo dhuguma namni siyaasaa dhugaa, kan akka Taaddasaa Birruu (Ernasitti Che Giyaveraa Oromoo) dhuguma jiraatee yoona Tigee qofa otoo hin taane GANTUUN O romoo keessa hin jirtuuyyu ture. Nu hundinuu afaanumaan odeessina. Hattuu yoo ajjeessan malee hattuun hattuudhuma dhalti. Kanaafuu. akka hattuun Oromiyaa keessaa mancaatu naannoo hundatti Oromoota kittaa suuran Mallas irratti chaapa’e uffadhaa jedhee nama dirqamsiisu ajjeessaa! Mana isaa itti gubaa! Suuraa Mallasis walitti qabaatii gubaa!
Gantuufi hattuun Oromoo keessaa haa baddu!
Lemma says:	09/09/2012 at 1:57 pm	“Gantuu Oromo, gantuu Oromo, gantuu Oromo…”
Yes every body knows that there is an oromo group working in the so called eprdf being unilaterally dicated by the tyrannical tplf killers. The oromo group like all the none Tigrian groups do not have its free will to act in ways it considers appropriate. That is also why the tplf killer is called a minority brutal tyrant to be removed by united forces.
Now that the head tyrant is dead for good oromos whether in the ruling party or outside better think and think now twice to stop factional recreminations and unite to reduce the power of the 6% tyrants dictating 94% Ethiopians. No need to keep crying about the past and the dead tyrant,s living propaganda from the grave forcing and dictating people like always to mourn and cry for him and reawrd his living mad running Dogs.
Jabaadha says:	10/09/2012 at 5:48 am	Jabaadha ilmaan Oromoo.yaa Qeerroo koo nuu jabaadha isin irraa abdanna.